ရွှေပြည်သာရှိရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်များ | iMyanmarHouse.com
သိန္း 100 မွ သိန္း 700 ထိ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိရောင်းရန်လုံးချင်းအိမ်များ
ဈေးနှုန်း သိန္း 100 မွ သိန္း 700 ထိ
🏢 လူနေထိုင်ရင်းပုံမှန်ဝင်ငွေရချင်သည့်မိတ်ဆွေများ 🏢 ရွှေပြည်သာ၁၃ ရပ်ကွက် အဆောင်နှင့်လုံးချင်းအိမ်...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10174775 အတွက် Great One Real Estate (ရွှေပြည်သာ) သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Great One Real Estate (ရွှေပြည်သာ) ပိတ်ရန်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10155366 အတွက် Ma Win Maw သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Ma Win Maw ပိတ်ရန်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10142775 အတွက် SPT Aung Cherry သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
SPT Aung Cherry ပိတ်ရန်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10110494 အတွက် SPT Aung Cherry သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
🙏🙏🙏...ရွှေပြည်သာမြို့နယ် (1)ရပ်ကွက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမအနီး လုံးချင်းအိမ် ရောင်းပါမည်...🙏🙏🙏...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10106365 အတွက် Aung Ta Khit Real Estate Service. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
🏠 ရွှေပြည်သာ အမှတ်(၆) ရပ်ကွက် 🏠 မြို့ဦးစေတီ မြောက် ဖက်မုဒ် အနီး 🏠 ရပ်ကွက်သန့် လူနေရန်နေရာကောင်းလေး...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10097160 အတွက် Great One Real Estate (ရွှေပြည်သာ) သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10057717 အတွက် Great One Real Estate (ရွှေပြည်သာ) သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရွှေပြည်သာတွင်လက်တင်နေရန်ရှာနေသူများ 🏠 စျေးတန်တန်နှင့်လုံးခြင်းအိမ်လေးရောင်းမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10051726 အတွက် Great One Real Estate (ရွှေပြည်သာ) သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မဂ်လာပါ 🙏 ရွေပြည်သာမြို့နယ် Second VIP(7) ဗိုလ်ရန်ပြေပတ်လမ်းမကြီးအနီး တစ်ထပ်တိုက်အိမ်ရောင်းမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10051458 အတွက် သစ္စာ အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ရေး သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သစ္စာ အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ရေး ပိတ်ရန်
◼️ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီးအနီး မြေစျေးသာသာဖြင့် နှစ်ထပ်လုံးချင်းအိမ်သန့်သန့်လေး ရောင်းမည် ◼...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10050223 အတွက် Golden Asia Real Estate and General Service Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်